AKHRISO: Kooxaha Ay Ka Tirsan Yihiin LIXDII Ciyaartoy Ee
Maamulka Premier League ayaa shalay shaaciyey natiijada baadhitaan ay ku sameeyeen qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha Premier League, iyadoo kuwa kalena la filayo inay Arbacada maanta iyo Khamiista berri kusoo dhamaystiraan.
748 qof oo iskugu jira ciyaartooyo iyo shaqaalaha tababarka ayaa waxa kasoo baxday natiijo ah in lix ka mid ah ay qabaan fayraska, kuwaas oo la gelinayo karantiil aan loo ogolaan doonin inay ciyaartoyda kale iyo shaqaalaha soo dhex-galaan muddada ay kasoo bogsanayaan kaddibna lagu samayn doono baadhitaano kale.
Natiijadan oo soo baxday xilli ay soo kordhayaan ciyaartoyda kasoo horjeedda in tababarka Salaasadii bilaabmay gebi ahaantiiba dib loo dhigo, isla markaana diiday inay qayb ka noqdaan sida Troy Deeney iyo Leroye Sane, ayaa waxa hadda soo baxaya kooxaha ay ka tirsan yihiin ciyaartoyda iyo shaqaalaha laga helay caabuqa.
Dhamaan xubnahan ayaa waxay ka kala tirsan yihiin saddex kooxood oo kaliya, waxaana tirada ugu badan ay joogaan Watford oo hal ciyaartoy iyo laba ka mid ah shaqaalaheeda tababarka ay ka mid noqdeen kuwa laga helay caabuqa.
Burnley ayaa iyaduna xaqiijisay in tababare ku-xigeenkeeda Ian Woan uu ka mid noqday dadka laga helay caabuqa, laakiin inta kale ee shaqaalaheeda iyo ciyaartoydu ay caafimaad qabaan.
Labada qof ee kale ayaa la sheegay inay isku koox yihiin, balse lama magacaabin midda ay tahay.
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo la filayo in dib loo bilaabo bisha June, kooxuhuna ay tababarkoodii ugu horreeyey bilaabeen shalay kaddib markii Isniintii ay heshiis ku gaadheen in ay laylintu bilaabanto, waxa sii kordhaya ciyaartoyda diiddan in gebi ahaanba ay garoomada yimaaddaan illaa inta fayraska laga adkaanayo.
Sida uu qoray wargeyska The Athletic, tiro ciyaartooyo cusub ah ayaa kacdoonka kula biiray Troy Deeney, waxaanay ku wargeliyeen in aanay iman doonin tababarka illaa inta ay jiraan xaaladaha lasoo sheegayo.
Deeney oo ah Kabtanka Watford ayaa hore u sheegay in wiil uu dhalay oo shan bilood jira ay dhibaato ka haysato dhinaca neefsiga, haddii uu dibedda ugu baxo tababarna uu ka baqayo inuu xanuunkan soo qaado oo uu gurigiisa keeno, kaddibna uu sabab u noqdo in wiilkiisu halis galo.
axadle 2010 posts